Blogger of this week: MadhuSudhan Guragain - MeroReport
Blogger of this week: MadhuSudhan Guragain
मधुसुधन गुरागाईं, काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा नं १२, खोपासी बजार घर भएपनि बनेपामा बसेर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको वहाँको पत्रकारिता यात्रा, स्थानीय साप्ताहिक, काभ्रेकै रेडियो एबिसी हुँदै हाल नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिका प्रकाशनहरु नागरिक र रिपब्लिका दैनिकको संवाददातासम्म आइपुगेको छ । कम्युनिकेसन कर्नरवाट रेडियो तालिम लिएर रोश्ना सुब्बा, निर्जला कक्षपति र सुचित्रा श्रेष्ठ मिलेर मधुसुधनले विगतमा रेडियो सगरमाथामा हालचाल नाम समाचार बुलेटिन पनि संचालन गर्नुभयो ।
ब्लग लेख्न कहिलेदेखि सुरु गर्नभयो ?
ब्लग लेख्ने लहड चलेको सन् २००६ देखि नै हो । त्यतिखेर www.mguragain.blogspot.com बनाएँ, त्यो पनि ब्लगस्पटको साइटमा गएर हेल्पमा भएको जानकारीका आधारमा । यसका लागि कसैलाई पनि गुरु बनाएको थिइनँ । अरुले बनाएको ब्लग हेरेर सुरु गरेको पहिलो ब्लग आज पनि अपडेट गर्न सकिरहेको छैन । अब चाँहि अपडेट गर्छु । तर यस वर्षको वर्ल्ड ब्लगर्स डेका अवसरमा http://meroreport.net को शुभारम्भ कार्यक्रममा भाग लिएपछि भने ब्लग लेख्न खुब जाँगर चलेको छ । किनकि यसमा अरु ब्लगमा जस्तो लेख्न र पोष्ट गर्न झन्झट छैन । के का लागि ब्लग लेख्नुहुन्छ ? ब्लग केका लागि लेख्ने भन्ने प्रश्नमा ठ्याक्कै १०० मा १०० अङ्क ल्याउने गरि जवाफ दिन सक्दिन । वेब २.० को आगमन पछि ब्लगजस्ता सोसल नेटवर्क साइटहरु बनाउन, सामग्रीहरु पोष्ट गर्न, तुरुन्त प्रकाशन गर्न र पाठकबाट तुरुन्त पृष्ठपोषणसमेत पाइहाल्ने भएकाले आत्मसन्तुष्टिको महसूस हुन्छ । त्यसैले पनि ब्लग लेख्छु । अर्को कुरा, आफुले खोजेका कतिपय समाचारहरु विभिन्न कारणवश आफू कार्यरत माध्यममा प्रकाशन/प्रसारण नहुँदा आफूले गरेको खोजीलाई पाठकहरु र साथीसँगीहरुवीच पुर्याउन पनि ब्लग निकै भरर्र्दो माध्यम भएकोले ब्लग लेख्ने गर्छु ।
खासगरी ब्लगमा कस्ता कुराहरु लेख्न रुचाउनुहुन्छ ?
ब्लगमा आफूले देखेको, भोगेका र प्रकाशन हुँदा यसबाट समाजलाई तत्कालै प्रभाव पार्ने खालका विषयवस्तुहरु लेख्न मन लाग्छ । यतिखेर भने बढी जसो समाचारहरु नै लेखेको छु । यदाकदा फोटोहरु पनि पोष्ट गर्दै आएको छु।
नेपाली ब्लग क्षेत्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ?
नेपालमा पनि ब्लगरहरुको संख्या बढ्दो छ । नेपाली ब्लगरहरुको डाइरेक्टरी हेरेको थिएँ, थुप्रै ब्लगरहरु भइसकेका रहेछन् । यो सकारात्मक सूचक हो । विगतमा समाचारहरुका लागि सुरु भएका ब्लग साइटहरु अहिले विविध विषयमा समेत सुरु हुन थालेका छन् । अघि भनेझैं यो सबै वेब २.० विकासको बरदान नै हो किनकि ब्लगका मार्फतबाट आफ्ना विचार तथा भोगाईहरु साटासाट गर्न पाउनु साँच्चिकै हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
नढाँटीकन भन्ने हो भने म ब्लगको सिकारु हुँ । सन् २००६ मा ब्लगको खाता त खोलेँ तर त्यसमा जसोतसो प्रोफाइल फोटो पोष्ट गर्न सकेँ तर अरु कुरा पोष्ट गर्नै सकिन । २,४ पटक प्रयास गरेँ । त्यतिखेर बनेपामा डायल अप इन्टरनेट थियो । कछुवा चालको गतिमा पेज खुल्थ्यो, जाँगर नै मर्न थाल्यो । तैपनि काठमाडौं गएका बेला कमलादीमा वर्ल्ड बैंकले सञ्चालन गरेको पब्लिक इन्फर्मेसन सेन्टरमा नेट सर्फिङ गर्थेँ । त्यहाँ हाइस्पिडको इन्टरनेट भएपनि सोसल नेटवर्क साइटहरु चलाउन गाह्रो थियो । हरेक कम्प्युटरलाई सिसिटिभीबाट निगरानी हुन्थ्यो । ब्लग खोलेर पोष्ट गर्न लाग्यो, गार्ड आएर ‘दाई के साइटमा गएको’ भनि हाल्थे । त्यसपछि लामो समय ब्लगबाट टाढै रहियो। तपाईंले त मुलधारको पत्रकारिता पनि गर्नहुन्छ ।
नेपालमा पत्रकारिता पेसा कत्तिको सजिलो छ ?
पेशा जुनसुकै होस सोचेजत्तिको सजिलो त पक्कै हुँदैन । त्यसमा पनि नेपालको पत्रकारिता । आम नागरिकले पत्रकार पनि हाम्रै समाजका सदस्य हुन्, उनीहरुको खुशीमा रमाउनु पर्छ र दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास नभएको अवस्थामा त झनै मुस्किल काम हो, पत्रकारिता । माओवादी र सरकारवीच द्वन्द्व चलेको अवस्थताका भन्दा पनि अहिले हामी पत्रकारहरु असुरक्षित बन्दै गएका छौं । विधिको शासन नभएको बेलामा जस्तै यतिखेर पत्रकारहरूले विभिन्न समूह र उपसमूहको डर र धाकधम्कीको सामना गर्नु पर्ने भएको छ । देखेको कुरा निर्भयसाथ लेख्न सक्ने अवस्था छैन ।
पत्रकारिता गरेर हेर्ने नभई, साँच्चिकै गर्ने काम हो । निष्ठाको पत्रकारिता गर्न सक्नुपर्यो । कस्का लागि पत्रकारिता गर्दैछु भन्ने कुरालाई सदैव सम्झनु पर्यो । मोफसलमा काम गर्ने हामीजस्ता पत्रकारहरुले विषयगत ज्ञान नै नभए पनि सबै ‘बिट’मा कलम चलाउनु परेको छ, यस्तो अवस्थामा टिक्न त गाह्रो हुन्छ । तैपनि सन्दर्भ सामग्रीहरुको अध्ययन गर्ने, इन्टरनेटमा नियमित सर्फिङ्ग गर्ने, समाचारको विषयवस्तुसँग जोडिएका विज्ञहरुसँग प्रष्ट नहुँदासम्म जानकारी लिने, आफूले लेखेका समाचारहरुलाई एक पटक आफु पनि पाठक बनेर ‘पाठकप्रति कत्तिको न्याय र कर्तव्य निर्वाह गरेको छु’ भनेर सोच्ने हो भने नेपालमा पत्रकारिता कठिन कार्य हो भन्ने जस्तो लाग्दैन ।
असुरक्षा त मुख्य चुनौती नै भइहाल्यो । उदाहरणका लागि विराटनगर घटनालाई हेरे पुग्छ । त्यसपछि पत्रकारहरुको वृत्ति विकास, स्थानीयस्तरमै विज्ञहरु पाउन कठिन, पियनको भन्दा पनि कम तलबमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता, अवसरको कमीजस्ता अनेकौं चुनौतीहरु विद्यमान छन् ।
मुलधारको पत्रकारिता र ब्लग लगायत मार्फत गरिने नागरिक पत्रकारिता बिच के फरक पाउनुभएको छ ? मूलधार र नागरिक पत्रकारिता फरक हो भन्ने मलाई लाग्दैन । दुबैले आम नागरिकलाई सूसुचित गर्ने नै हो । नागरिक पत्रकारिता जो कोही नागरिकले गर्न सक्छ । एउटा नागरिकले आम नागरिकका लागि नागरिक पत्रकारिता गर्छन् । तत्कालीन अवस्थामा गाउँले देउराली पाल्पाका सम्पादक आदरणीय विनय कसजू सरले सुरु गर्नु भएको ‘बेरफूट जर्नालिज्म’ नै अहिलेको परिष्कृत नागरिक पत्रकारिता हो । मूलधारको पत्रकारितामा पेशागत पत्रकारहरु संलग्न हुन्छन् । उनीहरुले व्यावसायिक सिप र दक्षताका साथ पत्रकारिता गर्छन् । प्रक्रिया फरक हो तर दुबै विधाको उद्देश्य एकै हो, आम नागरिकलाई सूसुचित गर्ने ।
तपाइले निरन्तर रुपमा मेरो रिपोर्टमा ब्लग पनि लेखिरहनु भएको छ, तपाईंलाई किन मेरो रिपोर्टमा योगदान गर्न मनलाग्छ ?
मैले मेरै ब्लगमा लेखेँ भने पनि यसलाई आम पाठकसम्म पुर्याउन मलाई निक्कै मेहनत गर्नु पर्छ । अर्को कुरा ब्लग साइटमा रहेका ड्यासबोर्डमा काम गर्न असजिलो छ । किनकि यसका निर्माताहरुले संसारभरका ब्लगरहरुलाई उपयोगी हुने गरि बनाएका हुन्छन् । मेरो रिपोर्टमा ब्लग लेख्न एकदम सजिलो छ । युनिकोडमा परिवर्तन गर्न, टेक्स्टका साथै मल्टिमिडियालाई समेत पोष्ट गर्न सजिलो छ । अर्को कुरा यसका उपयोगकर्ताहरु नेपाली पत्रकारहरु र ब्लगरहरु रहेका हुँदा उनीहरुले सहजै रुपमा अध्ययन गरेर पृष्ठपोषण दिने भएकाले पनि मेरो रिपोर्ट साँच्च्किै उपयोगी छ । अर्को नेपाल र विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकार र ब्लगरहरुको साझा चौतारीसमेत भएकाले मेरो रिपोर्टमा योगदान गर्न मन लागेको हो ।
मेरोरिपोर्टमा मधुसुधन गुरागाईंको प्रोफाइल पेजः
Comment by Indra Dhoj Kshetri on February 12, 2012 at 8:40am
Congratulations Dai. It is interesting. I read it very late, though. Your enthusiasm, cooperativeness and zeal to use new technology inspires mealot. Thank you for all your contribution to MeroReport. Will love reading more in the days.
Comment by Ram Sharan Pudasainee on July 14, 2011 at 2:44pm
Comment by MadhuSudhan Guragain on July 8, 2011 at 12:40pm
@Aakar: Thank you Bhai
@Elan: thanks dear
Comment by Aakar Anil on July 8, 2011 at 11:20am
Congratulation Madhu Dai.
Comment by RAMKUMARELAN.COM on July 7, 2011 at 6:01pm
Comment by MadhuSudhan Guragain on July 7, 2011 at 5:18am
@Sb:Thank you for aspiration
@Rupen:Thanks, will continue to add more contents.
Comment by एसवी गौतम on July 6, 2011 at 11:45am
Congratulation MadhuSudhan sir !
Comment by Rupen on July 6, 2011 at 10:54am
Congratualation MadhuSudhan Ji!! Hope to see more interesting contents in near future.